प्रिस्क्रिप्शन बिना स्मार्ट ड्रग्स किन्नुहोस् र असीमित रहन सुरु गर्नुहोस् [वनक्लिक]
एडीएचडी भनेको के हो?
धेरै व्यक्तिहरू हामीलाई सोध्छन् "एडीएचडी भनेको के हो?"। ADHD अर्थ ध्यान डेफिसिट Hyperactivity डिसऑर्डर हो। यो एक अराजक हो जुन सामान्यतया बाल्यकालमा विकसित हुन्छ, तर कहिलेकाँही वयस्कता वा वयस्कता सम्म निदान पनि हुँदैन।
ADHD ध्यान दिन वा ध्यान दिन एक व्यक्तिको असक्षमताको विशेषता हो। पीडितहरूले बेचैनी, आवेग र विघटनको भावना प्रदर्शन गर्छन्। तिनीहरू पनि अत्यन्त अधीर र सजिलै विचलित हुन्छन्, जब उनीहरूको रुचिलाई केहि गरीरहेको छ। अवस्था अक्सर सिक्ने समस्याको रूपमा हेरिन्छ किनकि यसले नाटकीय तरिकामा सिकाई प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्न सक्छ।
त्यहाँ ADHD को निदान वरपर धेरै विवाद छ। केही व्यक्तिहरूले "hyperactivity" को थप निदान गलत, अनावश्यक, अनुपयुक्त र आपत्तिजनक पनि फेला पार्दछ। किनभने यो विकार प्रायः बच्चाहरूमा देखापर्दछ, धेरैले विश्वास गर्दछन् कि यो अत्यधिक निदान भएको छ वा मनोवैज्ञानिक र औषधि उद्योगहरूले उनीहरूको उत्तेजक बच्चालाई बुझ्ने कोशिस गर्न परिवारमा सोच्ने प्रयास गरेको छ। यस अवस्थाको बारेमा वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट धेरै बुझिएको छैन।
एडीएचडी कारणहरू: एडीएचडीको कारण के हो?
धेरै व्यक्तिहरूको दिमागमा यो प्रश्न खडा हुन्छ कि जब उनीहरू यस विकारबाट प्रभावित कसैलाई भेट्छन्, "के कारण एडीएचडी हुन्छ?"। धेरै व्यक्ति ADHD कारणहरू वा ADHD लक्षणहरू के हुन् भनेर बेवास्ता गर्दछन्। यसै कारणले गर्दा, यस विकारबाट प्रभावित व्यक्तिको दर दिन प्रतिदिन बढ्दैछ। यस रोगका लक्षणहरू पहिचान गर्न र यसलाई राम्रोसँग उपचार गर्नका लागि व्यक्तिहरूले ADHD के कारण हुन्छ भनेर सजग हुनु आवश्यक छ। यसले यो अराजकलाई जन्म दिन सक्छ।
यस खण्डमा, हामी कारकहरू प्रस्तुत गर्छौं जसले वयस्कहरू र बच्चाहरूमा अन्वेषण डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसअर्डर निम्त्याउँछन् जसलाई अन्वेषकहरूले पहिचान गरे।
वयस्कहरूमा एडीएचडीका कारणहरू
ADHD को सहि कारण पत्ता लागेको छैन। यद्यपि धेरै अनुसन्धानहरूले विभिन्न सम्भावित स्पष्टीकरणहरू जाँच गरेका छन्।
जेनेटिक र न्यूरोलॉजिकल
अवस्था आंशिक रूपमा तपाईको आनुवंशिक मेकअपको कारणले भएको देखिन्छ। यो विकार यो बिना व्यक्तिको भन्दा मानिससँगको आफन्तहरूमा बढी सामान्य हो, र दुई जुम्ल्याहा भाइ / बहिनीले यो भएको खण्डमा यस विकार हुने सम्भावना बढी हुन्छ। यद्यपि यो बुझ्नु महत्वपूर्ण छ कि तपाईको परिवारमा कसैलाई एडीएचडीको साथ हुनु भनेको तपाईको एडीएचडी हुनेछ भन्ने होइन। ADHD का लागि जीनहरू पाउँदा तपाइँलाई गडबडीको कारण हुँदैन; यसको मतलब यो हो कि तपाईसँग यो हुन सक्छ।
एडीएचडीका साथ व्यक्तिलाई मस्तिष्कको केहि क्षेत्रहरूमा गतिविधिको विभिन्न स्तरहरू देखाइएको छ, जस्तै मस्तिष्कको अगाडि रहेका क्षेत्रहरू जुन योजना र व्यवहारको नियन्त्रणमा संलग्न छन्। साथै, मस्तिष्कको क्षेत्रहरू जुन आन्दोलन नियन्त्रणमा संलग्न छन् फरक देखाउँदछ। यो हुन सक्छ किन ADHD का बच्चाहरु fidget देखिन्छ र अनियंत्रित रूपमा सर्छन्।
अन्वेषकहरू पनि एडीएचडीका मुख्य लक्षणहरूले कसैको जीवनका अन्य पक्षहरूलाई असर गर्ने मोडेलहरू लिएर आएका छन्। यसले देखाउँदछ कि बेवास्ता, अति सक्रियता, र आवेगको समस्याले उनीहरूको जीवनलाई कसरी असर गर्न सक्छ।
बच्चाहरूमा एडीएचडीका कारणहरू
एडीएचडी एक सामान्य व्यवहार विकार हो कि स्कूल-उमेर बच्चाहरू को अनुमानित 8% देखि 10% लाई असर गर्छ। केटाहरूको तुलनामा केटाहरू भन्दा तीन गुणा बढी सम्भावना हुन्छ, यद्यपि यो किन अझै बुझिएको छैन।
ADHD का बच्चाहरु बिना सोच सोच्न कार्य गर्दछ, hyperactive हो, र ध्यान केन्द्रित गर्न समस्या छ। उनीहरूले के अपेक्षा गर्छन् भनेर बुझ्न सक्दछन् तर उनीहरूलाई पछ्याउन समस्या हुन्छ किनभने तिनीहरू चुप लागेर बस्न, ध्यान दिन वा विवरणमा उपस्थित हुन सक्दैनन्।
निस्सन्देह, सबै बच्चाहरू (विशेष गरी साना बच्चाहरू) कहिलेकाँही यस्तो व्यवहार गर्दछन्, विशेष गरी जब तिनीहरू चिन्तित वा उत्साहित हुन्छन्। तर एडीएचडीसँग भिन्नता भनेको लक्षण लामो समय अवधिमा देखा पर्दछ र बिभिन्न सेटिंग्समा देखा पर्दछ। उनीहरूले बच्चाको सामाजिक, शैक्षिक र घरमा काम गर्ने क्षमतालाई बिगार्दछन्।
बच्चाहरूमा ध्यान डेफिसिट हाइपरक्टिविटी डिसअर्डरको एक भन्दा बढी कारणहरू छन्, जसमध्ये प्रायजसो जैविक पक्षबाट उत्पन्न भएको पाइन्छ। केही अवस्थाहरूमा, यस्तो अवस्थाको लागि आमाबाबुलाई दोष दिन सकिन्छ, तर यो विश्वास गरिन्छ कि दिमागको संरचनामा परिवर्तन प्रमुख कारणहरू हुन सक्छ। यसबाहेक, त्यहाँ केहि वातावरणीय एजेन्टहरू छन् जसले सम्भवत: बच्चाको व्यवहारलाई परिमार्जन गर्न सक्दछ।
परिमार्जित शरीर रचना र मस्तिष्क तालिका
बच्चाहरू जो एडीएचडी हुन्छन् मस्तिष्कको कार्यमा उनीहरूको समकक्षहरूको तुलनामा उल्लेखनीय भिन्नताहरू हुन्छन्। मस्तिष्कमा उपस्थित रसायनहरू, अर्थात् न्यूरोट्रान्समिटरहरू, यस्तो व्यवहारको लागि जिम्मेवार हुन्छन्। यी रसायनहरू मस्तिष्कमा उपस्थित कोषहरूको अन्तर्क्रियाको लागि आवश्यक छ। यस डिसअर्डरसँग सम्बन्धित न्यूरोट्रान्समिटर, डोपामाइन भनेर चिनिन्छ, खराबीको लागि प्रवृत्ति गर्छ र यसैले नतिजामूलक परिणामहरू हुन्छन् जसमा आवेग, एकाग्रता र उच्च रक्तचाप समावेश गर्दछ। यसबाहेक, यो वैज्ञानिक तवरले प्रमाणित भएको छ कि एडीएचडी डिसअर्डर भएको बच्चामा सामान्य बच्चाको तुलनामा दिमागको मात्रा सानो हुन्छ। त्यस्ता बच्चाहरू कम संवेदनशील हुन्छन् जहाँ उनीहरूलाई या त प्रशंसित गरिएको छ वा सजाय दिइन्छ।
एडीएचडी डिसअर्डर उच्च रक्तचापको निदान गर्ने अभिभावकबाट हस्तान्तरण गरिएको पनि विश्वास गरिन्छ। प्रत्येक चौथाई बच्चा जुन यो विकारबाट ग्रस्त छ ADHD सँग सम्बन्धित छ। यो विकार पनि अधिक सामान्य जस्तै जुम्ल्याहा भेटिन्छ। बच्चाले एडीएचडी प्राप्त गर्न सक्ने सम्भाव्यताहरू पनि छन् यदि आमाबुवाहरू मानसिक अशान्ति चाहन्छ भने।
धूम्रपान गर्ने बानी भएका गर्भवती आमाहरू एडीएचडीको साथ बच्चा जन्माउने खतरा हुन्छन्। त्यस्तै गरी, गर्भधारण अवधिमा रक्सी वा अन्य लागूपदार्थको प्रयोगले डोपामाइन उत्पादन गर्ने न्यूरन्सको क्रियाकलापलाई प्रभावकारी ढंगमा रोक्न सक्छ। अन्धकारको कारण यो छ कि एक गर्भवती महिलालाई पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनिल जस्ता रासायनिक विषको सम्पर्कमा आउँदछ। यस्तो रासायनिक व्यापक रूपमा कीटनाशक उद्योगमा प्रयोग गरिन्छ।
कोकेन जस्ता औषधीहरूको सेवन मस्तिष्क रिसेप्टर्सको सामान्य वृद्धिमा बाधा उत्पन्न भएको छ।
साथै, त्यस्ता केसहरू छन् जहाँ आमाहरू कम स्नेही हुन्छन् र आफ्नै बच्चाहरूको लागि धेरै आलोचनात्मक हुन्छन्। तिनीहरू पनि शाब्दिक एक सानो कारण को लागी गम्भीर सजाय दिनुहुन्छ। यस्तो अवस्थाले बच्चाको व्यवहारमा सम्भवतः एडीएचडीको लक्षण देखाउँदछ।
वातावरणीय विषमा एक बच्चाको प्रदर्शन
बच्चाहरू, जब सीसा र पोलीक्लोरीनयुक्त बाइफेनिल जस्ता वातावरणीय विषाक्त पदार्थहरूको संपर्कमा पर्दा, यो विकार हासिल गर्ने डर हुन्छ। नेतृत्व स्तरमा बढि जोखिमले बच्चाको हिंसात्मक व्यवहारको परिणाम पनि दिन्छ। सीसा बालुवा, धूलो र पानी पाइपहरूमा पनि पाइन्छ। अन्य सम्भावित वातावरणीय कारकहरूले प्रदूषण, खाद्य सामग्रीहरू जसमा कृत्रिम रंग र फ्लोरोसन्ट प्रकाशको जोखिम शामिल छन्। चाखलाग्दो कुरा के छ भने, चिनी पनि केहि केसहरुमा hyperactive व्यवहार को शूटिंग को साबित भएको छ।
त्यहाँ केहि अन्य जोखिम कारकहरू छन् जुन ADHD निम्त्याउँछन्। तिनीहरू एक लामो अवधिको लागि टेलिभिजन हेर्ने समावेश छ कि मस्तिष्क एक स्थिर उत्तेजना चाहना बनाउन सक्छ।
बच्चाको दैनिक खानामा कमजोरीहरू जुन गरिब पोषणको लागि खातामा परिणत हुन्छ यसको परिचालित व्यवहारमा।
बच्चाहरू जो प्रेम र सुरक्षा रहित छन् भन्ने महसुस गर्छन् कि उनीहरूको आवश्यकताहरू पूरा हुँदैनन् र ADHD जस्ता लक्षणहरू विकास गर्दछन्।
तपाईको बच्चामा एडीएचडीको कारण जे पनि हुन सक्छ, यसलाई फेला पार्नु र ठीक समयमा उपचार गर्नु तपाईले गर्न सक्ने उत्तम कार्य हो, तपाईको बच्चालाई सामान्य जीवनमा फर्काउन। यद्यपि यसले केहि समय र उचित औषधी लिन सक्छ, बच्चालाई सामान्य स्थितिमा फिर्ता ल्याउनको लागि, एक धैर्य र पर्याप्त सावधानी अपनाउनुपर्दछ, उपचार अवधिभरि।
एडीएचडीका लक्षणहरू: एडीएचडीका लक्षणहरू के हुन्?
ध्यान डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसअर्डर (ADHD) को साथ सम्झौता गर्न सजिलो छैन। यो अवस्थालाई नराम्रो बनाउने कुरा थाहा पाउँदैन कि यदि तपाईं यस अराजकको शिकार हुनुहुन्छ भने।
प्राय: जसो एडीएचडीका लक्षणहरू बच्चाको विकासको रूपमा देखा पर्दछ। र वयस्कहरूमा पनि समय अवधिहरू हुन्छन् जहाँ उनीहरू केन्द्रित वा विचलित महसुस गर्दछन्। एडीएचडी लक्षणहरूलाई अन्य धेरै किसिमका सिक्ने असक्षमताहरू र भावनात्मक मुद्दाहरूको अन्य प्रकारहरूको विविधताका साथ भ्रमित गर्न पनि धेरै सजिलो छ। यसैकारण एडीएचडीको शंकास्पद केस स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरले पत्ता लगाउनु महत्त्वपूर्ण छ।
धेरै व्यक्ति आफैलाई सोध्छन् "के मसँग एडीएचडी छ?"। ठिक छ, त्यहाँ एक साधारण शारीरिक वा चिकित्सा परीक्षण मात्र छैन कि कसैको सर्त छ कि छैन निर्धारण गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। आफ्नो बच्चाको यो अवस्था हुन सक्छ भनेर शंका गर्ने आमाबुवाहरूको लागि बच्चाको चिकित्सकसँग उनीहरूको चिन्ताहरूको बारेमा बोल्नु महत्त्वपूर्ण छ। उनीहरूसँग बिभिन्न लक्षणहरूको चेकलिस्ट हुनेछ र यो निश्चित गर्न सक्दछ कि बच्चाले समान अवस्थाहरूको लक्षणहरू प्रदर्शन गरिरहेको छैन।
जे होस् मेडिकल प्रोफेशनलसँग परामर्श लिन सँधै सिफारिस गरिन्छ, एडीएचडीका केहि लक्षणहरू अप्रशिक्षित व्यक्तिहरूमा समेत स्पष्ट देखिन्छ। नेशनल इंस्टिट्यूट अफ मेन्टल हेल्थ (NIMH) का अनुसार, ADD का यी लक्षणहरूलाई तीन पदमा वर्गीकृत गरिएको छ - ध्यान नदिएको, hyperactivity, र आवेग।
निर्देशनको साथ सrug्घर्ष गर्दै
ध्यान नदिने वर्गको एउटा स्तम्भ पत्थर निर्देशनहरूको साथ संघर्ष गर्दैछ। यसले कार्य असाइनमेन्टमा निर्देशन सहित मुद्दाहरू समावेश गर्दछ, साथै स्कूल प्रोजेक्टहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न असफल भएकोमा। भ्रम र एकल कार्यहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न असमर्थता पनि निम्न निर्देशनहरूको साथ मुद्दाहरूमा सम्बन्धित छ।
Fidgeting र स्क्वायरिंग
हाइपरक्टिभ आन्दोलनहरू, जस्तै fidgeting र squirming, ADHD को लक्षण हुन सक्छ। यदि तपाईं सिटमा बसाइँ सर्न रोक्न सक्नुहुन्न, वा लगातार ट्याप वा एपेन्ड्याज हल्लाउनुहोस्, तपाईंको डाक्टरसँग एडीएचडी वा अन्य गम्भीर मुद्दाहरूको बारेमा कुरा गर्नुहोस्, जस्तै पार्किन्सन रोग वा टोररेट सिन्ड्रोम।
शान्त कार्य संग समस्या
यद्यपि निर्देशनहरूसँग संघर्ष गर्नु जस्तै नै, शान्त कामसँग समस्या भएको एक फरक हो, तर सामान्य, ध्यान डेफिसिट डिसअर्डर लक्षणहरू NIHM अनुसार। ADHD को यो चिन्ह प्रायः hyperactive आन्दोलन वा भोकलाइजेसनको साथ हातमा जान्छ। शान्त सेटिंग्स, जस्तै लाइब्रेरी वा अस्पतालहरू, प्राय: प्रमुख स्थानको रूपमा यो लक्षण लुकाउन सेवा गर्दछ।
आवेग कक्षाको शीर्ष अधीरतासँग सम्बन्धित छ। धेरै व्यक्तिहरू दैनिक आधारमा अधीरताको सामान्य स्तरको सामना गर्छन्। जहाँसम्म, जब धैर्यताको अभाव चरम क्षेत्रमा प्रवेश गर्छ, यो एडीएचडीको संकेत हो। शान्त रहन र तपाईंको सम्भावित मुद्दालाई प्रकाशित गर्न मद्दत गर्न तपाईंको वरपरका मानिसहरूसँग मिलेर बनेको तपाईंको क्षमता तुलना गर्नुहोस्।
ननस्टप कुरा गर्दै
बब्ली वा कुराकानी गर्ने व्यक्तित्वमा केहि गलत छैन। धेरै व्यक्तिको लागि यो मनपर्दो र रमाइलो छ। यद्यपि, जसले ब्यबहार, अत्यधिक मात्रामा, र कारण बिना बोल्दछन् एडीएचडीको सबैभन्दा प्रचलित लक्षण मध्ये एक संग संघर्ष गर्दै हुन सक्छ - ननस्टप कुरा गर्दै।
दिवास्वप्न र भ्रम
एकाग्रता को अभाव जस्तै, दिनको सपना सत्र मा गिर यो अक्सर यो अराजक संग सम्बन्धित छ। थप रूपमा, जब तपाईं यी डेड्रिमहरूबाट ध्यान पुन: प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ भने अलमल्ल हुन ADHD को संकेत हो। सबैजना एक मनमोहक मेमोरीलाई राहत दिइरहेका छन् वा समय-समयमा उनीहरूको दिमागमा घुम्न जान्छन्, तर जब यो गतिविधि अनियन्त्रित हुन्छ, यो मद्दतलाई विचार गर्ने समय हुन सक्छ।
अरूलाई अवरुद्ध गर्दै र कुराकानीहरूको साथ समस्या
सबै भन्दा मिलनसार व्यक्तिहरूले पनि समय-समयमा कुराकानीमा हड्ताल र ठक्कर लिन सक्दछन्, जसले गर्दा धेरै गलत मार्गहरू पार गर्दछन्। जब यी मुद्दाहरू अनियन्त्रित हुन्छन् वा धेरै पटक देखा पर्दछ, मुद्दा सम्भावित केसमा स्विच हुन्छ। यदि तपाईं अरूलाई प्राय जसो अवरोध गर्नुहुन्छ वा सामान्य कुराकानी मापदण्डहरूको पालना गर्न असफल हुनुहुन्छ भने, यी कार्यहरूले ठूलो मानसिक समस्यालाई रेखांकित गर्दछ। बच्चाहरूमा यो एडीएचडीको लक्षणहरूमध्ये एक हो।
के तपाईंलाई थाहा छ वयस्कहरूमा एडीएचडीको एक लक्षण लापरवाह सवारी चलाउनु हो? जब तपाईंसँग एडीएचडी हुन्छ, सडकमा तपाईंको ध्यान केन्द्रित गर्न धेरै गाह्रो हुन सक्छ। तपाईं सजिलै विचलित हुन सक्नुहुन्छ, जुन सडक दुर्घटनाको परिणाम हुन सक्छ। ट्राफिकले तपाईंलाई धेरै चंचल पनि बनाउन सक्छ। सबैभन्दा खराब कुरा यो हो कि तपाईं सडकमा तर्क र झगडामा फस्नुहुनेछ।
विश्वास गर्नुहोस् वा नगर्नुहोस्, वयस्कहरूमा एडीएचडीको सामान्य लक्षणहरू मध्ये एक सम्बन्ध समस्या हो। यो तथ्यको कारणले हो कि वयस्क एडीएचडी भएका व्यक्तिलाई सुन्न र प्रभावकारितापूर्वक प्रतिक्रिया दिन गाह्रो लाग्छ, न्यून संचारको परिणाम स्वरूप। प्रतिबद्धता सम्मान पनि समस्याग्रस्त हुन्छ। यसबाहेक, एडीएचडी भएका व्यक्तिहरूसँग अचानक रिसाइन्छ जुन विवाह, मित्रता वा अन्य सम्बन्धमा हानिकारक हुन्छ।
धेरै अन्य लक्षणहरू पनि एडीएचडीसँग सम्बन्धित छ। रातको खानामा अझै बस्न असक्षमता, अनुचित सेटिंग्समा ड्यास गर्दै, र सिक्ने सबैलाई यस विकारको सकारात्मक केसमा फिड गर्दछ। जे होस्, ती सबै यी सात ठूला स into्केतहरूमा फनेल गर्दछ वा तिनीहरूलाई कुनै आकार वा फारममा बढाउँदछ। यदि तपाइँ यी कुनै पनि लक्षणहरू, वा धेरैको संयोजनको साथ समस्या अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाइँको प्राथमिक देखभालकर्ता वा कुनै मनोवैज्ञानिकको साथ अर्को कार्यवाहीको बारेमा छलफल गर्न एडीएचडी निदानको लागि भेट्ने समय तालिका बनाउने विचार गर्नुहोस्।
ADHD निदान: कसरी ADHD निदान हुन्छ?
एडीएचडीको सामान्य लक्षण वा लक्षणहरू समावेश: आवेग, फिजटिंग, सजिलै विचलित हुँदै, र कार्यहरू समाप्त गर्न असमर्थता। जब बच्चाहरू अधिक सामान्य रूपमा निदान गरिन्छ, एडीएचडी एक बिरामी हो जसले धेरै वयस्कहरूलाई पनि असर गर्छ। बच्चाहरूमा एडीएचडी निदान गर्न मद्दतको लागि धेरै परीक्षणहरू विकास गरिएको छ, सबैभन्दा तल विश्वास गरिएका केही तल दिइएका छन्।
Stanford-Binet परीक्षण सबैभन्दा लोकप्रिय संज्ञानात्मक क्षमता आकलन हो, जसलाई IQ परीक्षण पनि भनिन्छ। यसमा xt० प्रश्नहरू हुन्छन् जुन व्यक्तिलाई जवाफ दिन सोधिएको थियो। यी उत्तरहरू त्यसपछि अनुमानित संज्ञानात्मक क्षमता, वा बिरामीको आईक्यू दिन मूल्यांकन गरिन्छ। यो परीक्षण अनलाइन र डाक्टर मार्फत लिन सकिन्छ।
बच्चाहरूको लागि वेसलर इंटेलिजेंस स्केल
बच्चाहरूको लागि लोकप्रिय परीक्षण भनेको बच्चाहरूको लागि वेसलर इंटेलिजेंस स्केल (WISC-IV) हो। यो परीक्षण and र १ of बर्ष बीचका बच्चाहरूमा आयोजित गरिन्छ र patient's 6-16 मिनेटहरू बीच बिरामीको सामान्य बौद्धिक क्षमता निर्धारित गर्न लिन्छ। परीक्षणमा पन्ध्र सबसेटहरू समावेश छन्, जुन पाँच मुख्य अनुक्रमणिका द्वारा मापन गरिएको छ। यी हुन्: मौखिक कम्प्रेसन अनुक्रमणिका, दृश्य स्थानिक सूचकांक, तरल तर्क तर्क सूचकांक, कार्य स्मृति अनुक्रमणिका, र प्रशोधन गति सूचकांक। यी अनुक्रमणिका पन्ध्र सबस्टट्सको साथमा परीक्षण गरीएको व्यक्तिगत परीक्षण गरिएको बौद्धिक क्षमता निर्धारण गर्न छन्, जसले परिणामस्वरूप एडीएचडीको निदान गर्न मद्दत गर्दछ।
बच्चाहरूको लागि काउफम्यान ब्याट्री
बच्चाहरूमा एडीएचडी पत्ता लगाउनको लागि अर्को लोकप्रिय परीक्षण भनेको काउफम्यान ब्याट्री फर चिल्ड्रेन (KABC) हो। केएबीसी संज्ञानात्मक विकास आकलन गर्न मनोवैज्ञानिक निदान परीक्षा हो जुन १ 1983 2004 मा विकसित गरी २०० XNUMX मा संशोधित गरिएको थियो। यो परीक्षण मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त र सांख्यिकीय पद्धतिमा नयाँ विकासहरू प्रयोग गर्दछ, जसले यसलाई बिरामी र डाक्टरहरूको बीच लोकप्रिय बनाउँदछ। केएबीसीले अपा groups्ग समूह र सिक्ने असक्षमताबाट पीडित समूहहरू, साथै सांस्कृतिक अल्पसंख्यकहरूलाई विशेष ध्यान दिन्छ।
एक डाक्टर र रेटिंग तराजू संग साक्षात्कार
यी परीक्षणहरूको थपमा, अवस्थाबाट पीडितको आश .्का गर्ने बिरामीले डाक्टरसँग अन्तर्वार्ता लिन सक्छ, जुन शारीरिक जाँच पनि गरिन्छ। एक व्यवहार र मूल्या parents्कन मापन चेकलिस्ट बिरामीका अभिभावक र शिक्षकहरूलाई भर्नको लागि दिइनेछ व्यक्तिलाई निगरानी गर्दा केही निश्चित कारकहरू र लक्षणहरू देखा पर्दछ भन्ने निर्धारण गर्न। यी रेटिंग सूचीहरू कुनै पनि परीक्षणहरू सँगै पहिले उल्लेख गरिएको यसलाई निदान गर्ने प्रभावकारी तरिकाहरूका लागि निर्धारित गरिएको छ।
एडीएचडी उपचार: एडीएचडी औषधि बनाम थेरापी
अभिभावकको रूपमा, तपाई जहिले पनि तपाईको बच्चालाई उत्तम समस्याको समाधान गर्न चाहानुहुन्छ उसलाई / उसलाई समस्याबाट छिटो र सहज तुल्याउन। तथ्य यो हो, त्यहाँ एडीएचडीको लागि उत्तम उपचार छैन र अर्को तथ्य यो हो, वर्तमानमा एडीएचडीको लागि कुनै उपचार छैन। जे होस्, तपाई निराश हुनु पर्दैन। उपलब्ध उपचारहरूले तपाईंको बच्चाको सफल जीवनमा मद्दत गर्दछ।
ADHD को लागी औषधि
बच्चाहरूका लागि एडीएचडी औषधिहरू
यो उपचार विकल्प व्यापक रूपमा प्रयोग गरीन्छ र छिटो प्रभावहरू ल्याउँछ।
पहिलो एडीएचडी औषधिहरू जुन प्राय: सिफारिश गरिन्छ उत्तेजक। यी उत्तेजकहरूले मस्तिष्कमा गतिविधि बढाउँछन्, विशेष गरी ध्यान, आवेग नियन्त्रण र फोकसका लागि जिम्मेवार क्षेत्रमा। उत्तेजकले सकारात्मक प्रभाव पार्छ जब यो फोकस र आत्म-नियन्त्रण सुधार गर्न आउँदछ। जहाँसम्म, जब सामाजिक कौशल र शिक्षाविद्हरूमा उपलब्धि को कुरा आउँछ, यी अझै पनि बच्चा आफैमा निर्भर छन्। उत्तेजक औषधीहरूले वास्तवमा दुबै मध्ये एक समावेश गर्दछ: मिथाइलफिडेट र एम्फीटामाइन्स।
दुबैको पहिलो विकल्प मेथिलफिनिडेट हो किनकि यसले कम साइड इफेक्टहरू फेला पारेको छ। मेथिलफेनिडेट वास्तवमा छोटो, मध्यम र लामो अवधिमा आउँदछ। यदि बच्चाले मेथिलफेनिडेटलाई प्रतिक्रिया गर्दैन भने, तब उसलाई एम्फेटामाइन्स दिइन्छ। छोटो अवधिको लागि जुन अन्तिम hours घण्टा, डेक्सट्रोस्ट्याट र डेक्सेड्रिन तोकिएको छ। मध्यम र लामो अवधिको लागि, Adderall निर्धारित छ।
यदि उत्तेजकहरू बच्चामा प्रभावकारी हुँदैनन् भने एटोमोक्सेटाइन र Antidepressants निर्धारित छन्। जब उत्तेजकहरू समावेश गर्ने दुई उपचारहरू असफल हुन्छन्, तब एटोमोक्सेटीन प्रक्रियाको अर्को चरण हो।
एडीएचडी औषधिहरूको बारेमा ध्यान दिन एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि त्यहाँ सबै बच्चाहरूको लागि सिफारिस गरिएको कुनै एक औषधि छैन। औषधी वास्तवमै एक परीक्षण र त्रुटि आधारमा दिइन्छ। यी सबै कसरी बच्चाले विशेष औषधिमा प्रतिक्रिया दिन्छन् भन्ने कुरामा निर्भर छन्। जे होस्, जब सही औषधि निर्धारित गरिन्छ, तब डिसअर्डरको लक्षणहरू पहिले नै सजिलैसँग व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ।
यदि त्यहाँ एडीएचडी औषधिहरूको बारेमा तपाईंले थाहा पाउनुपरेको अर्को कुरा छ भने, यो तथ्य यो हो कि तिनीहरूले वास्तवमा गडबडीको कारणहरूको उपचार गर्दैनन्। तिनीहरू सबै गर्न सक्छन् ADHD को लक्षणहरू कम गर्न। साथै, जब यी औषधीहरू परामर्श वा व्यवहार उपचारको साथ गडबडी हुन्छन्, यसले वास्तवमा ठूलो सौदा गर्न मद्दत गर्दछ।
वयस्कहरूको लागि एडीएचडी औषधिहरू
अवस्था बच्चाहरूमा अराजकता मात्र होईन। यो वयस्कहरूमा पनि देखा पर्दछ! यद्यपि यो व्यवस्थापन गर्न गाह्रो लाग्न सक्छ, त्यहाँ वयस्कहरूको लागि एडीएचडी औषधि प्रयोग गरेर आशा र उत्कृष्ट लाभहरू छन्।
त्यहाँ धेरै विकल्पहरू छन् जुन कुन एडीएचडी औषधि तपाईंको लागि उपयुक्त छ। तपाईं या त प्रिस्क्रिप्शन ADHD औषधि लिन सक्नुहुन्छ वा ADHD का लागि प्राकृतिक उपचारहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
एडीएचडी को लागी एक प्रिस्क्रिप्शन प्राप्त गर्न को लागी तपाई मनोचिकित्सक वा न्यूरोसाइकोलोजिस्टले पहिले पत्ता लगाउनु पर्छ। यसमा एडीएचडीको कुन उपप्रकार तपाईसँग हुन सक्छ भन्ने निर्धारण गर्न गम्भीर प्रश्न र परीक्षणहरू सामेल छन्। यसले कुन ADHD औषधि तपाईंको लागि सही छ भनेर निर्धारण गर्न मद्दत गर्दछ।
त्यहाँ वयस्कहरूको लागि धेरै प्रिस्क्रिप्सन ड्रग क्लासहरू छन् ADHD का साथ। यी उत्तेजकहरू देखि अन्य औषधि वर्गहरू सम्मिलित छन् जुन ADHD लक्षणहरूलाई मद्दत गर्नेको अप्रत्यक्ष प्रभावहरू छन्।
Adderall: एम्फेटामाइन र डेक्सट्रोअम्फेटामाइनको संयोजन हो। यो वयस्कहरूको लागि एडीएचडी औषधिको साधारण विकल्प हो। मध्यवर्ती स्नायु प्रणाली मा Aderall कार्य hyperactivity र आवेग नियन्त्रण कम गर्न मद्दत गर्न। तपाईको डाक्टरले तपाईको डोज परिवर्तन गर्नेछ जब सम्म तपाई उपचार योजना बनाउँनुहुन्न जुन तपाईको लागि सहि छ।
Ritalin (मेथेलफेनिडेट): एड्रेरल जस्तै समान केन्द्रीय स्नायु प्रणाली उत्तेजक हो। यसले hyperactivity र आवेग नियन्त्रणको लक्षणहरू कम गर्न मद्दत गर्दछ। Ritalin एक औषधि हो जसले दुबै ADHD र ADD लक्षणहरूलाई लक्षित गर्दछ। सिफारिश गरिन्छ कि यो औषधि एडीएचडी उपचारलाई अधिकतम बनाउन सल्लाहकार र अन्य उपचारहरू सहित एक सहायक उपचार कार्यक्रमको एक हिस्सा हो।
कन्सर्ट (मेथेलफेनिडेट): केन्द्रिय स्नायु प्रणाली उत्तेजकको रूपमा Ritalin जस्तै कार्य गर्दछ। कन्सर्ट्टा यस औषधि वर्गको लागि अर्को ब्रान्ड नाम हो, साथ साथै मेटाडेट।
Vyvanse (Lisdexamfetamine) वयस्कहरूको लागि नयाँ एडीएचडी औषधि हो। Vyvanse safely बर्ष भन्दा माथिको बच्चाहरुमा पनि सुरक्षित रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो एक केन्द्रीय स्नायु प्रणाली उत्तेजक हो जसले hyperactivity, आवेग नियन्त्रणको लक्षणहरू कम गर्दछ, र ADHD वयस्कहरूलाई मद्दत गर्दछ जुन द्वि घातुमान खाने समस्याहरू हुन् उनीहरूको आवेगको कारण। वयस्कहरूको लागि व्यावाँस एडीएचडी औषधीको उत्तम विकल्प हुनुको कारण यो छ कि अरु एडीएचडी औषधीहरू तुरुन्त रिलीज हुने जत्तिकै साइड इफेक्टहरू हुँदैन।
स्ट्रेटर्रा: यो औषधि एक उत्तेजक होइन, वयस्कहरूको लागि अन्य एडीएचडी औषधिको विपरीत। स्ट्रेट्रा एक चुनिंदा नोरपाइनफ्रिन पुनःअपटेक अवरोधक हो, जुन केहि एन्टीडिप्रेससन्टहरूलाई यस्तै प्रकारको कार्यविधि हो। यस औषधिको साथ एडीएचडीको उपचारको वास्तविक संयन्त्र अज्ञात छ। यद्यपि यो मस्तिष्कमा नोरेपाइनफ्रिनको वृद्धिबाट भएको हो भन्ने विश्वास गरिन्छ। Norepinephrine ध्यान अवधि र व्यवहारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। स्ट्र्रेरालाई उपचारको लागि मनोवैज्ञानिक, शैक्षिक, र सामाजिक उपचारको लागि उपचार कार्यक्रमको हिस्सा हुन सिफारिस गरिएको छ।
तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ वयस्कहरूको लागि एडीएचडी औषधिहरूको धेरै विकल्पहरू छन्। कुन औषधि तपाईंको लागि उपयुक्त छ भन्ने बारे अधिक जान्नको लागि, तपाईं आफ्नो अवस्थाको लागि के लिन सक्नुहुनेछ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सबै विकल्पहरूको अध्ययन गर्दा तपाईंको डाक्टरको सल्लाह लिनुपर्नेछ।
वयस्कहरूको लागि आईआर र XR प्रिस्क्रिप्शन ADHD औषधि बीचको भिन्नता
सबैले एडीएचडी औषधिहरूमा फरक प्रतिक्रिया गर्दछन्। यो केहि फरक औषधिहरू प्रयोग गरेर परीक्षण लिन सक्छ जुन तपाइँको लागि राम्रो काम गर्दछ।
आईआर र एक्सआर फॉर्मूलेसन बीचको भिन्नता उनीहरूले काम गर्ने समय फ्रेम हुन्। वयस्कहरूको लागि एडीएचडी औषधिहरूमा, औषधि प्रक्षेपण गरिएको समय एडीएचडी उपचारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।
आईआर फॉर्मूलेसन तुरुन्त रिलीज फॉर्म्युलेसनको रूपमा परिचित छ। यी फार्मुलेसनहरू तुरुन्तै काम गर्दछ एकचोटि इन्जेस्टेड भएपछि। एडीएचडीको साथ वयस्कको आवश्यकतामा निर्भर गर्दै, आईआर फॉर्मूलेसनहरू अधिक बारमा प्रशासनको आवश्यक्ता हुन सक्दछ, औषधी बन्द नगरेकोले।
ईआर फॉर्मूलेसन ओभरटाइम जारी हुन्छ। तिनीहरू कार्यको धेरै सहज सुरुवात प्रदान गर्दछन् र शरीरमा काम गर्ने समयको बृद्धि हुन्छ। आईआर फॉर्मूलेसनमा एडीएचडी अनुभवको साथ केही वयस्कहरूको साइड इफेक्ट कम गर्न यो विकल्प एक उत्तम विकल्प हुन सक्छ। यसका साथै ईआर फॉर्म्युलेसनहरू व्यक्तिहरूको साथ उत्तम विकल्प हो जुन उनीहरूको समयमै औषधि लिन बिर्सन्छन्।
वयस्कहरूको लागि प्राकृतिक एडीएचडी औषधिहरू
साथ साथै, वा वयस्कहरूको लागि एडीएचडी औषधि बिना नै, त्यहाँ प्राकृतिक उत्पादहरू छन् जुन वयस्क एडीएचडीको उपचारको लागि एक उत्तम विकल्प हुन सक्छ। प्राकृतिक एडीएचडी औषधि विचार गर्नु अघि, तपाइँको डाक्टरसँग विकल्पहरू छलफल गर्न नबिर्सनुहोस्।
माछा को तेल: ओमेगा fat फ्याट्टी एसिडहरूले वयस्कहरूको अवस्थामा मानसिक स्वास्थ्य कौशल बढाउन प्रमाणित गरेको छ। माछा तेलले hyperactivity सुधार गर्न, ध्यान अवधि सुधार गर्न, र अस्पष्ट सोच कम गर्न सक्छ। तपाईं या त क्याप्सूलको रूपमा माछाको तेल लिन सक्नुहुन्छ वा साल्मन, टूना, ट्राउट, र सार्डिनजस्ता खाद्य पदार्थहरूबाट। क्याप्सल फारमहरू धेरै सुविधाजनक छन्। एडीएचडीको लागि उच्च सिफारिश गरिएको माछाको तेल नोर्डिक नेचुरल्स द्वारा हो।
जिंक: धेरै अध्ययनहरूले hyperactivity र ADHD भएका व्यक्तिहरूमा जिंक पूरक लिनको साथ आवेगमा कमी देखाएको छ। अध्ययन वयस्क एडीएचडी बिरामीहरु लाई बिना अवस्थाको तुलनामा जिंकको तल्लो स्तरको उल्लेख छ। तपाईं क्याप्सूल फारममा जिंक लिन सक्नुहुन्छ वा यसलाई नटहरू, दुग्धजन्य पदार्थ, सिमी, सम्पूर्ण अन्नहरू, र सुदृढ खाद्यान्न जस्ता खानाहरूबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँ जस्तालाई एक औषधी पूरकको रूपमा विचार गर्दै हुनुहुन्छ भने, उत्तम पूरक ब्रान्ड छनौट गर्नको लागि अब फूड्स हो।
Melatonin: यो औषधि एडीएचडी सिधा सिधा सहयोग गर्दैन। समस्या निद्रामा परेकाहरूको लागि, मेलाटोनिन एक प्राकृतिक उपचार हो वयस्कहरूलाई रातमा निदाउन। एडीएचडीका साथ मानिस जो निन्द्राको कमीले एडीएचडी लक्षणहरूको विनाश गर्दछ।
वयस्कहरूको लागि एडीएचडी औषधि कुनैको जीवनको गुणस्तर सुधार गर्न लाभदायक हुन सक्छ। यदि तपाई कसैलाई महसुस गर्नुहुन्छ भने वा आफैंमा पनि एडीएचडी लक्षणहरू छन् भने निदान गर्न नडराउनुहोस्। वयस्कहरूको लागि एडीएचडी औषधि वर्षौंको लागि उपलब्ध छ। तिनीहरू प्रभावी रूपमा डिसअर्डर व्यवस्थापन गर्न मद्दतको लागि प्रमाणित छन्। धेरै वयस्कहरू जो एडीएचडी औषधिमा गएका छन् तिनीहरूको निर्णयमा पछुताउँदैनन्।
व्यवहार थेरापी धेरै समय र प्रयास लिन सक्दछ तर परिणाम धेरै इनामदायी हुन सक्छ। थप रूपमा, यदि अभिभावकले बच्चाहरूलाई एडीएचडी ड्रग्स लिन चाहँदैनन् भने, व्यवहार उपचार एक राम्रो विकल्प हो। व्यवहार थेरापीमा बच्चाहरूलाई प्रोत्साहनको साथ उनीहरूले राम्रो काम गर्ने गर्दछन् र उनीहरूले खराब काम गर्दा सजाय पाउनु समावेश गर्दछन् (तर, सजाय बारम्बार प्रयोग गरिनु हुँदैन)। संज्ञानात्मक व्यवहार थेरपीले बच्चाहरूलाई नकारात्मक विचारहरू चिन्न मद्दत गर्दछ र तिनीहरूलाई कसरी टाढा रहन्छ। औषधी उपचार भन्दा फरक, व्यवहार उपचारको प्रभाव स्थायी हो। सहि दृष्टिकोणको साथ, व्यवहार थेरापीले बच्चाहरूलाई सर्त ब्यबस्थित गर्न र मात गर्न मद्दतको लागि चमत्कार गर्न सक्छ।
एडीएचडीको लागि उत्तम उपचार के हो?
माथि उल्लेख गरेझैं एडीएचडीको लागि उत्तम उपचार छैन। जे होस्, आमाबाबुले ड्रग्स प्रति उनीहरूको रायमा आधारित निर्णय गर्न सक्छन्। यदि आमाबाबुले आफ्ना बच्चाहरूलाई ड्रग्स प्रयोग गरेको चाहँदैनन् भने, व्यवहार उपचार एक राम्रो विकल्प हुन सक्छ। औषधी भन्दा फरक, व्यवहार उपचार मात्र एक्लै बच्चाहरूलाई एडीएचडी लक्षणहरू प्रबन्ध गर्न मद्दत गर्दछ यदि अभिभावकहरूले यसलाई राम्रोसँग प्रयोग गरे भने। यद्यपि, अभ्यासहरू मार्फत डाक्टरहरूले सिफारिस गरे कि अभिभावकहरूले अधिकतम प्रभावको लागि औषधिको साथ ब्यवहारात्मक थेरापी प्रयोग गर्नुपर्दछ।